Global Voices teny Malagasy » Shina : Andao hanao paompy e ! (ala vokona) · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Jolay 2008 20:45 GMT 1	 · Mpanoratra Bob Chen Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Shina, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Vaovao Mafana
Mba fantatrareo moa hoe nahoana no manao paompy ny mpiserasera any Shina amin’izao fotoana izao?
Miraradraraka ny lahatsoratra manala azy amin’izao fotoana izao ao amin’ny Tianya.cn, raha vao misy fehezankevitra mipetraka ao amin’ny fanaovana dinika dia maro ny mametraka hevitra fohy ao, ohatra ny teny hoe, “tonga eto aho hanao paompy!”, “Inona koa no iraharahiako an’izany? Tonga eto aho hanao paompy fotsiny!”
Maro noho izany ireo naka ID na anarana vaovao mampiditra na manana fifandraisana amin’ny teny hoe “push-up” [paompy]. Ao amin’ny baidu.com moa dia afaka manangana vondrona amin’ny alalan’ny teny ifankafantarana, Nahangona fametrahan-kevitra na lahatsoratra mihoatra ny 10 000 ny vondrona paompy nandritra ny alina manontolo raha 100 monja no azony andro vitsy lasa izay.
Nosokafana ny vahikala iray Fuwocheng.com mitondra ny anarana ala vonkona shinoa hoe pinyin. Afaka manindry ny bokotra “manao paompy” ianao ao amin’ny vohikala, ary dia hahita ny hamaroan’ny olona avy amin’ny faritra isan-karazany manao fampiasan-tena toa anao. Shanghai no voalohan-daharana amin’izany amin’ny isan’olona manakaiky ny 20 000.
Saingy izao no zavatra iray mahavariana: Tsy mahazo manao paompy mihoatra ny in-telo ianao. Mety hisy olona hitsamboatra manko hilaza aminao amin-kitsi-po hoe tokony hitsahatra eo amin’ny faha-2 ianao.
Tandremo ! in-2 ihany ! Fa raha tsy izany dia tompon’andraikitra amin'ny ataonao ianao.
Rehefa vita ny paompy (ala vonkona), azafady mba jereo ny manodidina. Jereo sao misy hahavita vonoina tena !
(tena tsy diso ny teny ka, iharana manko ny teny hoe famonoantena eto. Ho fantatrao ny antony aoriana kely ao.)
Noho izany, ny fanaovana in-3 dia efa fiantsoana ny fiadiana tsy azo ivalozana indrindra.
Ny niandohan’ny firoboroboan’ny fanaovana paompy -ala vonkona- (PUSH-UP)
Ny fiandohan’ny ala vonkona, idirana resaka politika lalina, dia voahazona avy tamin’ilay rotaka nitranga tany Weng’an, Guizhou tamin’ny faha-28 Jona teo. Tamin’io andro io manko dia nodoran’ny olona mahatratra 30.000 ny biraon’ny polisy ho fanoherana ny fanafenan’ny polisy zatovolahy 3, izay mety hanana fifandraisana amin’ny manampahefana ao an-toerana, ary ahiahiana ho tompon’andraikitra tamin’ny fahafatesana tovovavy mpianatra 17 taona, Li Shufen (李淑芬). Nolazain’ny ray aman-drenin’i Li fa naolana dia avy eo novonoina nyzanany avy raha jerena tamin’ny ratra tamin’ny vatany.
Siosio nandeha fa hoe noafahan’ny polisy ny tena namono, izay nolazaina fa namono tena.
Na dia voarakitra tamin’ny finday sy ny fakantsary aza ny toe-javatra ary nanaitra ny firenena ny nahita tanora mpianatra anjatony nitoraka sy nandrava ny kaomisarian’ny polisy, dia teny vitsy monja no nolazain’ny fampahalalam-baovao ofisialy nilaza fa jiolahy no nitarika iny toe-javatra iny.
Nandritra izany fotoana izany, dia nampiasaina indray ny sivana, ary niasa 24 ora isan’andro ny mpiasa hamafa izay mety hikasika iny amin’ny aterineto Shinoa. Saingy tsy voasakana tanteraka kosa ny lahatsary sy feon’ny resaka anjorony.
Noho ny fahaporetana, tsy hatramin’ny 1 Jolay akory dia namoaka fanambarana ofisialy ihany ny Biraon’ny fampahalalam-baovao tao Guizhou. Tsy niova ny feo, mbolamanambara hatrany fa notarihina vondrona mpanetsiketsika kely ny vahoaka, ary nolazaina fa rendrika tsy naolana ilay zazavavy.
Io filazana io indrindra izay namerina indray ny nitranga tamin’ny alin’ny 21, araka ny fijerin’ny polisy, no niteraka ny firoboroboan’ny ala vonkona.
Sombin-dahatsoratra iray (avy amina mpandraharaha ara-bola) no misy izao:
经过调查得知，6月21日20时许，李树芬与女友王某一起邀约出去玩，同李树芬的男朋友陈某及其朋友刘某等吃过晚饭后，步 行到西门河边大堰桥处闲谈。李树 芬在与刘某闲谈时，突然说：“跳河死了算了，如果死不成就好好活下去”。刘某见状急忙拉住李树芬，制止其跳河行为。约10分钟后，陈某提出要先离开。当陈 某走后，刘某见李树芬心情平静下来，便开始在桥上做俯卧撑。当刘某做到第三个俯卧撑的时候，听到李树芬大声说“我走了”，便跳下河中。
Ny fanadihadiana no nahalalana fa tamin’ny 8 ora ny alin’ny 21 Jona, no niarahan’i Li hang nivoaka tamin’i Wang, ny sipany Chen, ary Liu (niaraka izy 4). Rehefa vita ny sakafo hariva dia niresaka ry zareo sady nanatona ny ny ilany andrefan’ny tetezan’i Dayan. Teo ampiresahana tamin’i Liu i Li no niteny tampoka hoe: “Hitsambikina any an-drenirano aho, na ho inona na ho inona hitranga. Fa raha tsy maty aho dia ho velona.” Tsy maintsy nihazona an’i Li i Liu mba hisorohana ny famonoantena. Folo minitra taty aoriana lasa i Chen. Liu kosa rehefa nahita an’i Li ho efa tonitony, dia nanao ala vonkona kely (nanao paompy ?) teo ambony tetezana. Teo amin’ny fahatelo indrindra izy no naheno an’i Li nihiaka hoe “Lasa aho”. Ary dia nitsoraka tany anaty rano i Li.
3 ora taty aoriana no hita ny nofo mangatsiakany.
Paompy 3, fiadiana tsy azo ivalozana, ozona, sa fanovamaso? Farafaharatsiny aloha dia ity no zavatra nampitokelaka indrindra ny olona avy amin’ny fitantarana. Mbola maro ny zavatra manjavozavo. Ahoana no ahasahian’ny jiolahy mandrava ny paositry ny polisy? Hita amin’ny lahatsary avokoa ve ny ankizy? Nahoana no te-hamono tena i Li? Nahoana moa no nisy nanafika ny dadatoan’i Li rehefa avy nametraka fitarainana tany amin’ny paositry ny polisy? Tsy misy fanazavana izany, fa hatsikana paompy.
Raha mbola nitohy soa amantsara ny adin’ny mametraka sy ny mamafa lahatsoratra, dia nahazo vahana tamin’ny tolona manaraka ny mpiserasera. Tamin’ny farany manko, minitra vitsy taorian’ny fanambarana ofisialy dia nirongaronga haingana dia haingana ny lahatsoratra nitondra ny lohateny hoe 我是来做俯卧撑的 (Tonga eto aho hanao paompy – ala vokona-) tao amin’ny Tianya. Niely nanerana ny aterineto ny lahatsoratra mifanahatahaka taminy. Io ihany angamba no fomba ahafahany manambara izay tsikariny, na ahafahany maneho ny alahelony sy ny hatezerany fotsiny.
Omeo paompy –ala vonkona -3 telo aho, dia afaka manosika ny tany. ——-Arishimeda
Manao paompy sa tsy manao paompy, izay no fanontaniana. ——–Hamlet
Nanonofy aho, fa indray andro afaka nanao paompy ankahalalahana ny mainty, ary tsy nisy sahy nanontany hoe nahoana. ——-Martin Luther King.
Ary azo tohizana ny lisitra.
Niova ho nisy teny hoe paompy avokoa ny fomba fitenenana malaza rehetra. Niova ho resaka paompy fotsiny ny tantara malaza. Feno sary ahitana olo-malaza manao paompy ny tahala. Niasa mangina nefa namirapiratra teo anoloan’ny sivana ny famoronan’ny olona. Tsy maintsy manao paompy isika!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/07/12/1128/